Nya Gyidi—Sisi Gyinae Nyansam! | Adesua
‘Kɔ so bisa wɔ gyidi mu; ɛnsɛ sɛ w’adwenem yɛ wo naa koraa.’​—YAK. 1:6.
NNWOM: 81, 70
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yegye tom sɛ ehia sɛ yesisi gyinae wɔ yɛn asetenam?
Adɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛma afoforo sisi gyinae ma yɛn?
Adɛn nti na ɛtɔ da a, ɛho behia sɛ yɛsesa gyinae bi a yɛasi dedaw?
1. Adɛn nti na Kain antumi ansi gyinae pa, na dɛn na efii gyinae a osii no mu bae?
NÁ ƐSƐ sɛ Kain si gyinae bi: Ná obetumi ahyɛ ne ho so anaasɛ obedi ne koma akyi ayɛ bɔne. Gyinae a obesi biara no, na nea ebefi mu aba no bɛka n’asetena ne nkwa nna a aka nyinaa. Ɛda adi sɛ wunim gyinae a Kain sii; wansi gyinae pa. Gyinae a osii no maa ne nua Habel a na odi nokware no hweree ne nkwa. Afei nso, gyinae a Kain sii no maa ɔne ne Bɔfo no ntam sɛee.​—Gen. 4:3-16.
2. Adɛn nti na ɛho hia sɛ yesisi gyinae nyansam?
2 Yɛn nso, yɛwɔ gyinae ahorow a ɛsɛ sɛ yesisi. Gyinae a yesisi no, ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ owu ne nkwa asɛm. Nanso, emu pii wɔ hɔ a ebetumi aka yɛn asetena paa. Sɛ yesisi gyinae pa a, ebetumi aboa yɛn ama yɛanya asomdwoe wɔ yɛn asetenam. Ɛremma yɛn asetena nyɛ hwanyann a nsɛmnsɛm ne huammɔdi ahyɛ no ma.​—Mmeb. 14:8.
3. (a) Sɛ yebetumi asisi gyinae a nyansa wom a, dɛn na ɛsɛ sɛ yenya mu gyidi? (b) Nsɛmmisa bɛn na yebesusuw ho?
3 Dɛn na ɛbɛboa yɛn ama yɛasisi gyinae a nyansa wom? Ehia ankasa sɛ yenya Onyankopɔn mu gyidi. Ɛnsɛ sɛ yɛn adwenem yɛ yɛn naa koraa sɛ Yehowa betumi aboa yɛn ama yɛanya nyansa, na ɔwɔ ɔpɛ nso sɛ ɔbɛyɛ saa. Afei nso, ɛsɛ sɛ yenya Yehowa Asɛm no ne ɔkwan a ɔfa so yɛ n’ade no mu gyidi, na yenya afotu a wɔnam Onyankopɔn honhom so kyerɛwee no mu ahotoso. (Kenkan Yakobo 1:5-8.) Bere a yɛrebɛn Yehowa na yɛrenya n’Asɛm no ho anigye kɛse no, ɛma yenya ahotoso sɛ ɔno na onim nea eye ma yɛn. Ɛno nti, bere biara a yebesi gyinae no, yebedi kan ahwehwɛ Onyankopɔn Asɛm no mu ansa na yɛayɛ saa. Nanso, yɛbɛyɛ dɛn atu mpɔn wɔ gyinae a yesisi mu? Ɔpɛ a yɛwɔ sɛ yebesisi gyinae no kyerɛ sɛ, sɛ yesi gyinae bi a ɛnsɛ sɛ yɛma biribiara sesa yɛn adwene anaa?
EHIA SƐ YESISI GYINAE WƆ YƐN ASETENAM
4. Gyinae bɛn na na ɛsɛ sɛ Adam si, na dɛn na efii gyinae a osii no mu bae?
4 Efi bere a wɔbɔɔ nnipa ara pɛ na ɛho behiae sɛ mmarima ne mmea nyinaa sisi gyinae a ɛho hia. Ná ɛsɛ sɛ Adam si gyinae sɛ obetie ne Bɔfo no anaasɛ obetie Hawa. Adam tumi sii gyinae, nanso wohwɛ gyinae a osii no a, wuhu no sɛn? Ne yere a na Satan adaadaa no no ma osii gyinae bɔne paa. Gyinae a Adam sii no maa Paradise asetena bɔɔ no, na awiei koraa no, ɔhweree ne nkwa. Nanso, na ɛno yɛ ɔhaw a wakɔfa aba no mfiase ara kwa. Gyinae bɔne a Adam sii no, yɛda so ara retwa so aba nnɛ.
5. Ehia sɛ yebu asɛyɛde a yɛwɔ sɛ yesisi gyinae no sɛn?
5 Ebinom wɔ adwene bi sɛ, sɛ yenni asɛyɛde biara sɛ yesisi gyinae wɔ asetenam a, anka asetena bɛyɛ anigye paa. Wo ne wɔn yɛ adwene anaa? Kae sɛ, Yehowa ammɔ nnipa sɛ robɔt anaa afiri bi a entumi nnwen nsisi gyinae. Nokwasɛm ne sɛ, Bible boa yɛn ma yehu sɛnea yebesisi gyinae a nyansa wom. Ɛwom sɛ Yehowa pɛ sɛ yesisi gyinae de, nanso ɛnkyerɛ sɛ ɔmpɛ yɛn yiye. Momma yɛnhwɛ nea ɛma yehu saa.
6, 7. Gyinae bɛn na na ɛsɛ sɛ tete Israelfo no si, na adɛn nti na na ɛyɛ den ma wɔn sɛ wobesi gyinae a nyansa wom? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
6 Bere a tete Israelfo no kɔtenaa Bɔhyɛ Asase no so no, ɛho behiae sɛ wosi gyinae titiriw bi. Ɛne sɛ: Ná wɔbɛsom Yehowa anaasɛ wɔbɛsom onyame (anaa anyame) foforo bi. (Kenkan Yosua 24:15.) Anhwɛ a, wobɛka sɛ anka ɛnsɛ sɛ ɛyɛ den ma wɔn koraa sɛ wobesi gyinae a ɛte saa. Nanso, na gyinae a wobesi no betumi ayɛ owu ne nkwa asɛm. Atemmufo no bere so no, mpɛn pii na Israelfo no ansisi gyinae pa. Wɔtwee wɔn ho fii Yehowa ho kɔsom atoro anyame. (Atem. 2:3, 11-23) Yɛnhwɛ nhwɛso foforo bi. Asɛm bi sii wɔ Onyankopɔn nkurɔfo abakɔsɛm mu akyiri yi a ɛmaa ɛho behiae sɛ wosi gyinae bi. Odiyifo Elia ma wohuu gyinae a ɛsɛ sɛ wosi pefee. Ɛne sɛ, wɔbɛsom Yehowa anaasɛ wɔbɛsom atoro nyame Baal. (1 Ahe. 18:21) Ná nkurɔfo no ntumi nsi gyinae, enti Elia kaa wɔn anim. Esiane sɛ nyansa wom na mfaso wɔ so paa sɛ yɛbɛsom Yehowa bere nyinaa nti, anhwɛ a ɛbɛyɛ wo sɛ na ɛnsɛ sɛ ɛyɛ wɔn den sɛ wobesi saa gyinae no. Nokwasɛm ne sɛ, na ɛnsɛ sɛ onipa biara a n’adwenem da hɔ ani gye ho sɛ ɔbɛsom Baal anaasɛ ɔde ne ho bɛbɔ Baal. Nanso, na Israelfo no ‘rehinhim nsɛm abien ntam.’ Enti nyansa wom sɛ Elia hyɛɛ wɔn nkuran sɛ wɔmfa wɔn ho nhyɛ Yehowa som a ɛno ne ɔsom a eye sen biara no mu.
7 Adɛn nti na ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛɛ den paa maa Israelfo no sɛ wobesi gyinae a nyansa wom? Nea edi kan ne sɛ, na Yehowa mu gyidi a wɔwɔ no asa, na wɔantie Yehowa nso. Ná wonni nokware nimdeɛ a edi mũ anaa ɔsoro nyansa; saa ara nso na na wonni Yehowa mu ahotoso. Sɛ na wɔwɔ nokware nimdeɛ a, anka ɛbɛboa wɔn ama wɔasisi gyinae a nyansa wom. (Dw. 25:12) Afei nso, Israelfo no maa afoforo kyerɛɛ wɔn nea wɔnyɛ, na wɔmaa afoforo sisii gyinae mpo maa wɔn. Israelfo no suasuaa asase no sofo a na wɔnsom Yehowa no, na ɛma wokodii saa abosonsomfo no akyi. Ná Yehowa fi bere tenten abɔ Israelfo no kɔkɔ sɛ biribi a ɛte saa betumi ato wɔn.​—Ex. 23:2.
ƐSƐ SƐ YƐMA AFOFORO SISI GYINAE MA YƐN ANAA?
8. Sɛ yɛhwɛ Israelfo abakɔsɛm a, gyinaesi ho asuade titiriw bɛn na yenya fi mu?
8 Nhwɛso a yɛasusuw ho no ma yenya asuade titiriw bi. Ɛne sɛ, yɛn ankasa na ɛsɛ sɛ yesisi yɛn gyinae. Afei sɛ yegyina Kyerɛwnsɛm no mu nokware nimdeɛ so sisi gyinae a, ɛnde yebesisi gyinae pa, gyinae a nyansa wom. Galatifo 6:5 ma yehu sɛ: “Obiara bɛsoa n’ankasa adesoa.” Ɛnsɛ sɛ yɛma obi foforo biara sisi gyinae ma yɛn. Mmom no, ɛsɛ sɛ yɛn ankasa sua ade na yehu nea ɛteɛ wɔ Onyankopɔn ani so na yɛn ara yɛyɛ.
9. Adɛn nti na ɛyɛ hu sɛ yɛbɛma afoforo asisi gyinae ama yɛn?
9 Ɛyɛ hu sɛ yɛbɛma afoforo asisi gyinae ama yɛn. Nanso, dɛn na ebetumi ama aba saa? Atipɛnfo nhyɛso betumi ama yɛasisi gyinae bɔne. (Mmeb. 1:10, 15) Nanso, sɛ afoforo hyɛ yɛn sɛ dɛn ara mpo a, yɛn na ɛyɛ yɛn asɛyɛde sɛ yɛma yɛn ahonim a yɛde Bible atete no no kyerɛ yɛn kwan. Mpɛn pii no, sɛ yɛma afoforo sisi gyinae ma yɛn a, na yɛayɛ yɛn adwene sɛ yɛne wɔn ‘bɛkɔ,’ anaasɛ yebedi wɔn akyi. Ɛno nso yɛ gyinae a yebetumi asi, nanso ebetumi de ɔhaw aba.
10. Dɛn na na ɛsɛ sɛ Paulo bɔ Galatifo no kɔkɔ wɔ ho?
10 Ɔsomafo Paulo twee Galatifo no adwene sii so pefee sɛ ɛyɛ hu sɛ wɔbɛma afoforo asisi gyinae ama wɔn. (Kenkan Galatifo 4:17.) Ná ebinom wɔ asafo no mu a wɔpɛ sɛ wosisi gyinae ma afoforo de twe wɔn fi asomafo no ho. Adɛn nti na na wɔpɛ sɛ wɔyɛ saa? Ná saa nnipa a wɔyɛ pɛsɛmenkominya no repɛ anuonyam ama wɔn ho. Ɛno nti, wɔyɛɛ ade ma ɛtraa so, na wɔammu hokwan a wɔn nuanom Kristofo wɔ sɛ wɔn ankasa sisi wɔn gyinae no.
11. Dɛn na yebetumi ayɛ de aboa ankorankoro ma wɔasisi wɔn ankasa gyinae?
11 Paulo daa no adi sɛ na obu hokwan a ne nuanom wɔ sɛ wɔn ankasa sisi wɔn gyinae no. Saa a ɔyɛe no yɛ nhwɛso pa ma yɛn. (Kenkan 2 Korintofo 1:24.) Ɛnnɛ, sɛ asafo mu mpanyimfo de afotu rema wɔ nneɛma bi a ankorankoro na ehia sɛ wosisi ho gyinae ho a, ɛsɛ sɛ mpanyimfo no di Paulo nhwɛso no akyi. Asafo mu mpanyimfo ani gye ho sɛ wɔne nguan no besusuw Bible mu nsɛm ho. Nanso, mpanyimfo no hwɛ yiye sɛ wɔrensi gyinae mma wɔn nuanom mmarima ne mmea. Mmom, wɔma wɔn ankasa sisi wɔn gyinae. Ntease wom sɛ mpanyimfo no yɛ saa efisɛ gyinae a ankorankoro besisi no, wɔn ankasa na wobegyina nea ebefi mu aba no ano. Asuade titiriw bi ni. Ɛne sɛ, yebetumi ama yɛn ani akũ afoforo ho, na yɛatwe wɔn adwene asi Kyerɛwnsɛm mu nnyinasosɛm anaa afotu bi so. Nanso, obiara wɔ hokwan ne asɛyɛde sɛ osisi n’ankasa gyinae. Sɛ wosisi gyinae nyansam a, wonya so mfaso. Ɛda adi pefee sɛ, ɛnsɛ sɛ yenya adwene da sɛ yɛwɔ tumi sɛ yesisi gyinae ma yɛn nuanom mmarima ne mmea.
Ahwɛfo a wɔwɔ ɔdɔ boa afoforo ma wohu sɛnea wɔn ankasa besisi wɔn gyinae (Hwɛ nkyekyɛm 11)
ƐNSƐ SƐ YEDI YƐN KOMA AKYI SISI GYINAE
12, 13. Adɛn nti na ɛyɛ hu sɛ yebedi yɛn koma akyi asisi gyinae bere a yɛn bo afuw anaa yɛn abam abu?
12 Nkurɔfo taa ka sɛ: Yɛ nea wo koma pɛ. Nanso, ɛyɛ hu paa sɛ yɛbɛyɛ saa. Afei nso, ɔkwan bi so no, ɛne Kyerɛwnsɛm no nhyia. Bible bɔ yɛn kɔkɔ sɛ, sɛ yɛresisi gyinae a, ɛnsɛ sɛ yedi yɛn koma a ɛtɔ sin no akyi anaa yegyina yɛn nkate so kɛkɛ yɛ saa. (Mmeb. 28:26) Nsɛm bi a esisii a Bible ka ho asɛm ma yehu awerɛhosɛm a ɛwom sɛ yebedi yɛn koma akyi asisi gyinae. Ɔhaw a ɛwom paa ne sɛ, nnipa a yɛtɔ sin de, yɛn “koma yɛ okontomponi sen ade nyinaa na ne ho yɛ ahometew.” (Yer. 3:17; 13:10; 17:9; 1 Ahe. 11:9) Enti wohwɛ a, sɛ yedi nea yɛn koma pɛ akyi a, dɛn na ebetumi ato yɛn?
13 Kristoni koma yɛ biribi a ɛho hia paa efisɛ wɔama yɛn ahyɛde sɛ, yɛmfa yɛn koma nyinaa nnɔ Yehowa na yɛnnɔ yɛn yɔnko sɛ yɛn ho. (Mat. 22:37-39) Nanso, Kyerɛwnsɛm no mu nsɛm a yɛaka ho asɛm wɔ nkyekyɛm a edi eyi anim no ma yehu asiane a ɛwom sɛ yɛbɛma yɛn koma akyerɛ yɛn nea ɛfata sɛ yesusuw ho ne nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Sɛ nhwɛso no, sɛ yesisi gyinae bere a yɛn bo afuw a, wohwɛ a, gyinae bɛn paa na yebesi? Sɛ yɛasisi gyinae bere a na yɛn bo afuw pɛn a, ɛnde yenim mmuae no. (Mmeb. 14:17; 29:22) Anaasɛ, sɛ wohwɛ a, yebetumi asisi gyinae pa bere a yɛn abam abu? (Num. 32:6-12; Mmeb. 24:10) Kae sɛ, Onyankopɔn Asɛm no ma yehu sɛ nyansa wom sɛ obi bɛyɛ “akoa ama Onyankopɔn mmara.” (Rom. 7:25) Ɛda adi pefee sɛ, sɛ yɛresisi gyinae a ɛho hia na yɛma yɛn koma kyerɛ yɛn nea yɛnyɛ a, ebetumi adaadaa yɛn.
BERE A ƐSƐ SƐ WOSESA W’ADWENE
14. Yɛyɛ dɛn hu sɛ ɛnyɛ mfomso sɛ obi bɛsesa gyinae ahorow bi a wasisi dedaw?
14 Ehia sɛ yesisi gyinae a nyansa wom. Nanso, ɛno nkyerɛ sɛ sɛ yesi gyinae bi wie a, ɛnsɛ sɛ yɛsesa yɛn adwene koraa. Ɛtɔ mmere bi a, ɛho behia sɛ yɛsan susuw gyinae bi a yɛasi dedaw ho na ebia yɛyɛ mu nsakrae. Momma yɛnhwɛ nea Yehowa yɛe wɔ sɛnea ɔne Niniwefo dii wɔ Yona bere so no. Bible ka sɛ: “Afei nokware Nyankopɔn huu wɔn nneyɛe, sɛ wɔasan afi wɔn akwammɔne so, enti nokware Nyankopɔn sesaa n’adwene wɔ ɔhaw a ɔkae sɛ ɔde bɛba wɔn so no ho, na wanyɛ wɔn hwee.” (Yona 3:10) Bere a Yehowa hui sɛ Niniwefo no anu wɔn ho na wɔatwe wɔn ho afi wɔn akwammɔne no ho no, ɔno nso sesaa n’adwene wɔ nea ɔkae sɛ ɔde bɛba wɔn so no ho. Ɔnam saa a ɔyɛe no so daa no adi sɛ ɔwɔ ntease, ahobrɛase, ne ayamhyehye nso. Afei nso, Onyankopɔn nyɛ n’ade sɛnea nnipa pii yɛ no. Ɔno de, ɛnyɛ sɛ ne bo fuwii ara pɛ na wasi gyinae.
15. Dɛn na ebetumi ama yɛasesa gyinae bi a yɛasi?
15 Ɛtɔ da a, ɛho behia sɛ yɛsan susuw gyinae bi a yɛasi dedaw ho. Ebetumi aba sɛ sɛnea na nneɛma te bere a na yɛresi gyinae no asesa. Yehowa sakraa gyinae ahorow a osisii mu bere a nneɛma sesae no. (1 Ahe. 21:20, 21, 27-29; 2 Ahe. 20:1-5) Anaasɛ ebia yebenya nsɛm foforo bi a ɛbɛma ɛho abehia paa sɛ yɛsakra gyinae bi a yɛasi mu. Wɔkaa Saul banana Mefiboset ho nsɛm bi a ɛnyɛ nokware kyerɛɛ Ɔhene Dawid. Nanso akyiri yi, bere a Dawid huu nokware a ɛwɔ asɛm no mu no, ɔsakraa gyinae a na wasi no mu. (2 Sam. 16:3, 4; 19:24-29) Ɛtɔ da a, nyansa wom sɛ yɛn nso yɛbɛyɛ saa ara.
16. (a) Nyansahyɛ a ebetumi aboa yɛn ama yɛasisi gyinae a nyansa wom no, ebi ne sɛn? (b) Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛsan susuw gyinae a yɛasisi dedaw no ho, na adwene bɛn na ɛsɛ sɛ yɛde yɛ saa?
16 Onyankopɔn Asɛm no tu yɛn fo sɛ, sɛ yɛresisi gyinae a ɛho hia a, ɛnsɛ sɛ yɛpere yɛn ho. (Mmeb. 21:5) Sɛ yɛrebesi gyinae bi, na yɛtɔ yɛn bo ase susuw biribiara a ɛfa gyinae a yɛrebesi no ho yiye a, ɛda adi sɛ ɛbɛma yɛatumi asi gyinae pa. (1 Tes. 5:21) Sɛ abusua ti bi rebesi gyinae a, ɛsɛ sɛ ogye bere hwehwɛ Kyerɛwnsɛm no ne Kristofo nhoma mu. Saa ara nso na ɛsɛ sɛ osusuw abusua no mufo adwenkyerɛ ho ansa na wasi gyinae no. Kae sɛ, Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ ontie ne yere. (Gen. 21:9-12) Ɛsɛ sɛ asafo mu mpanyimfo nso gye bere yɛ nhwehwɛmu. Sɛ asafo mu mpanyimfo hu sɛ, ɛsɛ sɛ wɔyɛ nsakrae wɔ gyinae bi a wɔasi dedaw ho a, wonsuro sɛ sɛ wɔyɛ saa a, afoforo bebu wɔn animtiaa. Ɛsɛ sɛ asafo mu mpanyimfo a wɔwɔ ntease na wɔbrɛ wɔn ho ase yɛ krado sɛ wɔbɛsakra wɔn nsusuwii ne gyinae a wɔasi bere biara a ɛho behia sɛ wɔyɛ saa no. Ɛyɛ papa sɛ yɛn nyinaa nso yɛ saa. Sɛ yɛyɛ saa a, ɛbɛma asomdwoe atena asafo no mu, na biribiara akɔ so pɛpɛɛpɛ.​—Aso. 6:1-4.
WUSISI GYINAE A, YƐ HO ADWUMA
17. Dɛn na ɛbɛboa yɛn ama yɛatumi asisi gyinae pa?
17 Gyinae a yesisi no bi wɔ hɔ a emu yɛ duru sen afoforo. Sɛ yɛrebesi gyinae a emu yɛ duru a, ehia sɛ yegye bere susuw ho kɔ akyiri na yɛbɔ ho mpae paa. Ɛho hia sɛ Kristofo binom si gyinae sɛ wɔbɛware anaasɛ wɔrenware. Saa ara nso na ɛsɛ sɛ wosusuw nea wɔbɛware no no ho. Gyinae foforo a emu yɛ duru a sɛ yesi a ebetumi ama yɛanya nhyira pii nso ne gyinae a ɛfa sɛnea yebetumi de yɛn ho ahyɛ bere nyinaa som adwuma no mu ne bere a ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa ho. Sɛ yɛrebesi gyinae a ɛte saa a, ehia sɛ yenya Yehowa mu ahotoso koraa sɛ obetumi ama yɛn akwankyerɛ pa, na ɔbɛyɛ saa nso. (Mmeb. 1:5) Yehowa ama yɛn afotu pa wɔ Bible mu. Ɛno nti, ɛho hia sɛ yɛhwehwɛ mu na yɛbɔ Yehowa mpae hwehwɛ akwankyerɛ. Ɛsɛ sɛ yɛkae nso sɛ, Yehowa betumi ama yɛanya su ahorow a ebetumi ama yɛasisi gyinae a ɛne n’apɛde hyia. Bere biara a ɛsɛ sɛ wusi gyinae bi a ɛho hia no, bisa wo ho sɛ: ‘Gyinae a meresi yi, ɛkyerɛ sɛ medɔ Yehowa? Ɛde anigye ne asomdwoe bɛba m’abusua mu anaa? Ɛkyerɛ sɛ mewɔ abotare, na me yam ye anaa?’
18. Adɛn nti na Yehowa pɛ sɛ yɛn ankasa sisi yɛn gyinae?
18 Yehowa nhyɛ yɛn sɛ yɛnnɔ no na yɛnsom no. Yɛn ankasa na ɛsɛ sɛ yesi ho gyinae. Esiane sɛ Yehowa ama yɛn kwan sɛ yɛn ankasa betumi apaw nea yɛpɛ nti, ɔpɛ sɛ yɛn ankasa ‘paw’ sɛ yɛbɛsom no anaasɛ yɛrensom no. (Yos. 24:15; Ɔsɛnk. 5:4) Nanso, gyinae foforo biara a yegyina n’akwankyerɛ so sisi no, ɔhwɛ kwan sɛ yɛbɛyɛ ho adwuma. Sɛ yenya Yehowa akwankyerɛ mu gyidi na yɛde nnyinasosɛm a wayi ne yam de ama yɛn no yɛ adwuma a, yebetumi asisi gyinae a nyansa wom, na yɛrenhinhim wɔ yɛn akwan nyinaa mu.​—Yak. 1:5-8; 4:8.